मोरङको ३ नं छेत्रीय सभापतिमा गणेशकुमार खड्का ५० मतले अगाडि « Koshi Nepal
प्रकाशित मिति : ८ मंसिर २०७८, बुधबार २२:५७
बेलबारी, ८ मङ्सिर । नेपाली काँग्रेसको १४ औँ महाधिवेशन अन्तर्गत मोरङ क्षेत्र न. ३ बाट क्षेत्रीय सभापतिमा गणेशकुमारको अग्रता कायमै रहेको छ । ३९३ मत गणना हुँदा सभापतिका उमेद्वार खड्काले २०० मत प्राप्त गरेका छन् । सभापतिका अर्का उमेद्वार राजेन्द्रप्रसाद ढकालले १५० मत प्राप्त गरेका छन् । त्यसैगरी सभापति पदका अर्का उमेद्वार केशव दुलालले १२ मत प्राप्त गरेका छन् ।
५१९ मतदाता रहेको ३ नं क्षेत्रमा ५११ मत खसेको थियो । खड्का कोइराला प्यानलका नेता मानिन्छन् । मतगणनाको पछिल्लो परिणामलाई हेर्दा क्षेत्र र महाधिवेशन प्रतिनिधि दुबैमा कोइराला प्यानलका उम्मेदवारहरूको अग्रता कायमै रहेको देखिन्छ ।
क्षेत्रीय सचिवमा राजेन्द्रबहादुर अधिकारी र राजेश खत्रीको अग्रता रहेको भने सहसचिवमा दिनेशकुमार सुवेदी र मोहन प्रसाद रिमाल अगाडि रहेका छन् । उता महाधिवेशन प्रतिनिधिमा ललितकुमार श्रेष्ठ, सूयर्माराज राई, सुनिल कुमार शर्मा. शेखरबहादुर थापा, मानबहादुर लिम्बू, वशन्त भट्टराई, लोकप्रसाद सङ्ग्रौला, राजकुमार लिम्बू, महेन्द्र सुवेदी र सञ्जय भट्टराई आदिको पनि अग्रता कायमै रहेको छ ।
सुन्दरहरैँचाको खोर्सानेमा बस दुर्घटना हुँदा १८ जना घाइते
मिर्गौलाका बिरामी सोमबहादुर श्रेष्ठलाई लोहनी कित्ता टोलवासीद्वारा रु.४२ हजार सहयोग